मनको भारी बिसाउने चौतारीको खोजी; सुन्ने सोमबारको शक्ति | काव्यालय
मनको भारी बिसाउने चौतारीको खोजी; सुन्ने सोमबारको शक्ति | फिचर | काव्यालय - Kavyalaya
by रञ्जु दर्शना October 17, 2020
बिहान उठ्नै मन लाग्दैन । बेलुका बल्ल बल्ल सुतेको हुन्छु; निदाउन पनि यति गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा मलाई कहिल्यै थाहा थिएन। खै के भाको के? न त हाँस्न मन लाग्छ, न कसैसँग कुरा गर्न मन लाग्छ। कोही पनि मेरो अगाडि नआइदिए हुने जस्तो लाग्छ। मलाई केही नसोधिदिए, केही नबोलिदिए हुन्थ्यो जस्तो पनि लाग्छ। म एकदम छुच्चो भएँ रे भन्छन् । कसैले त दुष्ट पनि भने । सार्है नराम्रो लाग्यो । आफू भित्रको यो भारी अरु कसैले देख्न नसक्ने रहेछन् । म आफैलाई पनि के को भारी हो भन्ने थाहा छैन तर मलाई थिचिरहेको छ यो भारीले । के गरुँ? कसो गरुँ? कसैले मलाई बुझ्दैनन् । म त बाँच्दिन जस्तो लाग्छ । – २४, महिला
म केही पनि गर्न सक्दिन । मेरो त भविष्य पनि छैन, सबै अँध्यारो छ । मलाई कसैले माया पनि गर्दैन, सम्मान पनि गर्दैन । मेरो ममी बाबाले मलाई पढाएको जति सबै खेर गयो, मैले केही पनि गर्न सकेको छैन । म बाँच्नु नै बेकार हो, म बाँचेर कसैलाई केही फाईदा पनि छैन । कान्छो अंकलको छोराले के-के गरी सक्यो, उसको लाईफ कति राम्रो छ, सबै कुरा प्रफेक्ट । मेरो भने हरेक दिन किचकिच, टेन्सन । मलाई केही कुराको पनि सम्झना हुँदैन, सबै बिर्सेको जस्तो छु । म के नै गर्न सक्छु र अब? म आफैँ नालायक भएर यस्तो भा’को हो । – १८, पुरुष
मलाई लाखौँ मानिसले चिन्छन् । म के गर्छु, कसरी कँहा बस्छु सबै याद गर्छन् । मेरो बारे सानो-सानो कुरा पनि थाहा पाँउछन् अनि नानाथरी भन्छन् । मलाई धेरै चित्त दु:ख्छ, मेरो परिवारलाई पनि चित्त दु:ख्छ । मैले चाल्ने एक एक कदममा निकै होस पुर्याउनुपर्छ नत्र सबैले मलाई घृणा गर्छन् । मलाई घृणा गरे भने त म अगाडि बढ्नै सक्दिन, मैले अहिलेसम्म पाएका सबै कुरा खेर जान्छन् । म नै बिलिन हुन्छु । मैले मेरो हैसियत बनाई राख्नु पर्छ । मलाई कामहरू चाहिन्छ तर म सँग अहिले कामहरू नै छैनन् । मेरो काम राम्रो भए पनि प्रशंसा नै गर्दैनन् मेरो ।म सायद राम्रो छैन । मैले अहिले सम्म प्राप्त गरेका सफलता झुक्केर, भाग्यले आको हो । मेरो आफ्नो खुबिले होईन जस्तो सोच आइरहन्छ। म केहीको लायक छैन ।
म कँहा हुन्छु अनि? लौन मलाई कसले माया गर्छ? मैले केही काम पनि गर्न सक्दिन । मलाई दिनरात यस्तो सोचाई मात्र आउँछ । कसैलाई भन्न पनि सक्दिन मेरो बारेमा के सोच्लान भन्ने पिर लाग्छ । मलाई बाँच्नै मन लाग्दैन । यति पीडा, तनाव भन्दा बरु मरिदिन्छु भन्ने लागि नै रहन्छ । – ३२, चर्चित व्यक्ति
म पहिले भन्दा एकाएक मोटाएको छु । देख्ने जतिले कमेन्ट गर्छन् “छ्या के भाको यस्तो? सुँगुर जस्तो ! भैँसि, गैँडा; के के हो के के? तर तिनिहरूको कमेन्ट टाउको माथि बाट जान्छ । सुनेको जस्तो त लाग्छ तर मेरो मन अरु कुराहरूले भारी छ । म आफुँ राम्ररी हिँड्न त सक्दिन भारी भएर । न खानपिनको टुङ्गो छ न सुत्नुको । खै के भयो के? मलाई के लाग्छ भने मेरो अस्तित्व स्विकार नै गर्दैनन् । मेरै ममी-ड्याडीले मलाई म जस्तो छु त्यस्तै माया गर्दैनन् भने म बाँच्नु कै कुनै अर्थ छैन। मलाई जागिर पनि दिन्छन् कि दिँदैनन् अनि म कसरी पैसा कमाउने, जिन्दगी जिउने? यो समाज नै पापी छ । म मरे भने यो समाज लाईबरु जाति होला । -२४, अल्पसङ्ख्यक व्यक्ति
आजभोलि केही गर्न पनि ईच्छा लाग्दैन । पहिला पहिला गर्न रमाईलो लाग्ने कुराहरू पनि आजभोलि थोपो मन पर्दैन । हरेक समय गलेको, रिङ्गटा लागेको मात्र महसुस हुन्छ । एकदमै थकित ! बल्ल बल्ल केही काम गर्न थाल्यो म टोलाई मात्र रहेको हुन्छु । फेसबुक चलाउँ भनेर हेर्यो कोही मरेको, दु:ख भएको देख्ने बित्तिकै आफैँ हो त्यो जस्तो गरी भक्कानेर आउँछ । बेस्समारी रुन्छु अनि गल्छु । कसैले पनि बुझ्दैनन् परिवारमा । छोरो सानै छ, उसले थाहा पाउला कि भनेर हाँसेको जस्तो गर्छु तर मन भित्र भित्रै धेरै भारी छ । के गर्ने नै थाहा छैन । शरीरमा केही भएछ कि न भनेर उसको बाबालाई लिएर जचाउन गा’को ब्लड टेस्ट, एक्स-रे, सबै नर्मल छ । अब मैले ढाँटेको जस्तो भा’को छ! मलाई झनै तनाव थपिएको छ । – ४८, महिला
म बाउ भएर पनि मेरो परिवारलाई केही राम्रो गर्न सकिन । जागिर पनि छुट्यो, पैसा आउने ठाँउ छैन । के गरी घर चलाउने हो । बुढिको तलबले घर खर्च पुग्दैन, मलाई वरपरकाले नि नराम्रो वचन लगाउँछन् । म केही पनि गर्न नसक्ने भए, म असाध्यै कमजोर, काम नलाग्ने भए । यिनीहरूको लागि पनि म बोझ नै भएँ, अब म बाँचेर केही काम छैन । -५५, पुरुष
विभिन्न समयमा भएको कुराकानीमा आधारित माथिका स-साना हरफहरू जिवनको छुट्टा- छुट्टै गोरेटोमा हिँडि रेहका मानिसहरूको हो । तर कता कता उहाँहरूले भोगेको व्यथा भने समान छ । उहाँहरूको मनको भारीको एकदमै छोटो अंश पढ्दा मात्रै पनि पाठकलाई असहज महसुस हुन सख्छ, दु:ख लाग्न सक्छ, उस्तै उस्तै समय बाट गुज्रिएको हो भने आँशु टिलपिलाउन सक्छ । यो सबै स्वभाविक हो । संसारमा यस्तो पनि भारी छ जुन न मापन गर्न मिल्छ, न त मापन गर्न सकिन्छ त्यहि पनि मानिसलाई हजारौं माइलको यात्रा गर्नबाट रोकिरहेको हुन्छ यो अदृश्य भारीले । यो मानिसको मन मष्तिस्कमा चलायमान भार हो जसलाई ठ्याक्कै सामुन्नेको मानिसले सजिलै याद गर्न सक्दैन किनभने यो भारी बोकिरहेको मानिसले मात्रै चारैतिर अन्धकार देख्न थाल्छन् जब कि संसार भने उहि गतिमा पहिलेझैं चलिरहेको हुन्छ । अरुको दु:ख देख्दा, सुन्दा मात्रै पनि मन भारी हुनु, उदास हुनु मानव भएको प्रमाण हो तर कोही व्यक्ति लगातार २ हफ्ता भन्दा बढि समयसम्म उदास छ भने त्यो संवेदनशील कुरा हो । तुरुन्तै ती व्यक्तिलाई मनोपरामर्श अथवा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी अस्पतालमा लगेर जचाउनु पर्छ। जचाउनु, जाँच्नु भनेको सामान्य कुरा हो तर हामीले हाउगुजी बनाइदिएका छौँ । जसरी पेट दुखेर छटपटी हुँदा अस्पताल कुदाइन्छ त्यसरी नै मन- मष्तिस्कमा छटपटी भएर मानिस केही गर्न नसक्ने हुँदा अस्पताल कुदाउनु पर्छ नत्र परिणाम डरलाग्दो हुन्छ । मानिस जस्तो सुकै भौतिक सुख सुविधामा भएपनि, नभए पनि मानसिक स्वास्थ्य बिग्रिन सक्छन् । कारण व्यक्ति पिच्छे फरक फरक हुन सक्छन् तर प्राय परिणाम भने एउटै भएको हामीले देखिरहेका छौँ : आत्महत्या ।
आत्महत्याकै सोच आउन थाले पछि अनिवार्य अस्पताल गइहाल्नुपर्छ, यो निकै संवेदनशील प्रभाव हो मानसिक स्वास्थ्यको यात्रामा । तर यो प्रभावसम्म कोही पनि मान्छे त्यसै एकैपटक आइपुग्दैन । निरन्तरको तनाव, चित्त दुखाइ, कामबाट ध्यान हट्दै जानु, काममा विफल भएको महसुस गर्न थाल्नु, सम्बन्धहरू चिसिनु , शारीरिक स्वास्थ्यमा पनि असर हुनु, लगायतका कुराहरूले मानसिक स्वास्थ्यमा खेलिरहेको हुन्छ । यसमा सबै भन्दा महत्त्वपुर्ण एउटा कुरा भनेको ‘आफ्नो मनको भारी’ बिसाउन नसक्नु अथवा भारी बिसाउने चौतारी नभेट्नु हो । यो मनको भारी बिसाउने चौतारी भनेको पीडामा परेको मानिसको सबै कुरा सुन्न सक्ने धैर्यता भएको मान्छे हो । अर्को मान्छे बोल्दा बोल्दै प्वाक्क जान्ने पल्टिने, आफ्नो सल्लाह सुझावको बाजा बजाउन थाल्ने नजिक कै मानिसहरूले गर्दा पनि धेरै जनाले आफ्नो पीडा, भय, दु:खका कुराहरूको भार बनाएर मनमा राखेका छन्, त्यो कसैलाई सुनाउने आँट नै गर्दैनन् र परिणाम भयावह हुनजान्छ ।
यसै कारणले पनि गत पौष देखि ‘सुन्ने सोमबार’, ‘सोमबार सुन्ने बार’ को संचालन गर्दै आएकी छु । अङ्ग्रेजीमा ‘Monday For Mental Health’ ले चिनिने यो कार्यक्रममा जो कोही आउन सक्नुहुन्छ- मनको भारी बिसाउन । मेरो अनुभवमा एकजनाले मनको भारी बिसाइरहँदा त्यँहा उपस्थित अन्यले केही हदसम्म ठिक महसुस गर्नुहुन्छ किनभने उनलाई लाग्छ ‘मनको व्यथा लागेको म मात्र एक्लो होइन रहेछु ।’
म मात्र एक्लो होइन रहेछु भन्ने महसुस गर्नु निकै ठूलो कुरा हो जसले एकजना दुखी मान्छेलाई एउटा आशा दिन्छ, भरोसा दिलाउँछ कि ऊ पनि यो प्रभावबाट निस्किन सक्छ र फेरि खुसी हुनसक्छ । यसैले पनि ‘सुन्ने सोमबार’ मेरो मनको निकै नजिक छ किनभने यसले धेरै पोलेको, काँडा बिझेको मनमा मल्हम लगाउने शक्ति बोक्छ। हामी सबैजना Non-Judgemental याने कसैले आफ्नो कुरा बतायो भने कुरा नकाट्ने, उसलाई असली साथ प्रदान गर्ने खालको बन्न सक्यौँ भने धेरै साथी-सङ्गी, परिवारको सदस्यलाई आत्महत्याको मुखबाट बचाउन सक्छौँ । जीवनको कुनै न कुनै मोडमा सबैजनाले मानसिक स्वास्थ्यको समस्या भोग्नु परेको हुन्छ त्यसैले एकअर्का प्रति समानुभूति राखौँ , करुणा बाँडौँ ।